हुवावे: एन्ड्रोइड पाईमा ब्याट्री अनुकूलन कसरी प्रयोग गर्ने Androidsis
हुवावे फोनहरू जुन एन्ड्रोइड पाई मूल रूपमा अपडेट भएका छन् वा छन्। विभिन्न ब्याट्री प्रबन्धन विकल्पहरूको साथ फेला पर्‍यो। उनीहरूलाई धन्यबाद, फोनमा सबै समयमा राम्रो उपभोग प्राप्त गर्न सम्भव छ। फोनमा ब्याट्री कम भएको अवस्थामा केहि राम्रो सहयोग हुन सक्छ। EMUI को प्रयोग अनुकूलन गर्नका लागि एक अर्को तरीका, चिनियाँ ब्रान्ड कोट.
EMUI र एन्ड्रोइड पाई मा Huawei मा यो ब्याट्री अनुकूलन को उपयोग गर्न धेरै सरल छ, तर धेरै उपयोगी। एकातिरबाट, हामीसँग धेरै मोडहरू छन् ऊर्जा बचत, हामीसँग एन्ड्रोइडमा सामान्य रूपमा रहेकोमा थप। एक Huawei फोन संग धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो विचार गर्न एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
1 Huawei मा ब्याट्री अनुकूलन
2 शक्ति बचत मोडहरू
Huawei मा ब्याट्री अनुकूलन
यो ब्याट्री अनुकूलन विकल्प केहि छ जुन एन्ड्रोइड पाईको साथ परिमार्जन गरिएको थियो, केहि सुधारहरू सहित। हुवावे फोन सेटिंग्समा हामीसँग यो सम्भावना छ, ब्याट्री सेक्सन भित्र। के हुन्छ जब हामी यो फंक्शन प्रयोग गर्छौं केहि प्रक्रियाहरू खोजी गर्नका लागि जुन हाल फोनमा चालु छ, जुन त्यस समयमा हाम्रो लागि धेरै प्रयोग नहुन सक्छ। उपकरणमा शक्ति खपत गर्दै छन्.
यस तरिका मा, प्रक्रियाहरू जस्तै स्वचालित सि sy्क्रोनाइजेसनउदाहरण को लागी, तिनीहरु नि: शुल्क गर्न सकिन्छ, फोनमा ऊर्जा बचत गर्न मद्दत गर्दै। हामीले भर्खरै त्यो विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र हामीले त्यस समयमा कुन प्रकृयाहरू बन्द गर्न सक्दछौं भन्ने खोजी गर्न सुरू गरौं। केहि सेकेन्ड पछि यसले स्क्रीनमा यी विकल्पहरू देखाउनेछ र हामी कुन प्रक्रिया बन्द गर्न चाहन्छौं छनौट गर्दछ।
यो बारेमा छ फोनमा ब्याट्री बचत गर्ने एक राम्रो तरिका, उपलब्ध छन् कि ऊर्जा बचत मोड को सहारा बिना। समयको साथ एन्ड्रोइड पाईमा सिद्ध गरिएको फंक्शन र हामी यो सरल तरिकामा हुवावे फोनमा मज्जा लिन सक्दछौं।
शक्ति बचत मोडहरू
एन्ड्रोइड पाईको साथ Huawei फोनहरूसँग विभिन्न पावर उपभोग वा पावर सेभ मोडहरू छन्। एन्ड्रोइड ओरेओमा पहिले नै केही मोडहरू उपलब्ध थिए, जुन अब कुलमा बढेर तीन गरिएको छ। यो विकल्पहरूको एक श्रृंखला हो जुन हामीलाई परिस्थितिको आधारमा उपभोग घटाउन मद्दत गर्दछ। हामी तपाईंलाई पहिले यी तीन मोडहरू र उनीहरू के गर्छौं भन्ने बारे अधिक जानकारी दिन्छौं।
अधिकतम प्रदर्शन मोड: यो एक मोड हो जुन बचत प्रदान गर्दैन, तर अधिक चाँडै ब्याट्री उपभोग गर्दछ। यस मोडलाई धन्यबाद, हामी हाम्रो Huawei स्मार्टफोन कार्य उच्चतम सम्भव प्रदर्शनमा गरिरहेका छौं। यसको शक्ति अधिकतममा बढाइयो, जसले फोनलाई अत्यधिक तातो पार्न सक्छ। यो एक मोड हो जुन हामी फोर्टनाइट खेल्छौं भने हामी प्रयोग गर्न सक्छौं, उदाहरणका लागि।
ऊर्जा बचत मोड: क्लासिक ऊर्जा बचत मोड, एन्ड्रोइड पाईमा पनि प्रस्तुत। जब हामी यो विधि प्रयोग गर्दछौं, फोनले केहि प्रक्रियाहरू बन्द गर्दछ। यो पृष्ठभूमिमा फोनको गतिविधि सीमित गर्न, स्वचालित सिnch्क्रोनाइजेसन असक्षम गर्न, भिजुअल प्रभावहरू कम गर्न र प्रणाली ध्वनि हटाउन जिम्मेवार छ। यो प्रयोग गर्न सकिन्छ जब एक कम, तर पर्याप्त प्रतिशत एक समयको लागि रहन्छ।
अल्ट्रा उर्जा बचत मोड: धेरै धेरै चरम बचत बचत मोड, जसमा फोनले आफ्ना गतिविधिहरू अधिकतममा कम गर्दछ, मात्र केही अनुप्रयोगहरू काम गर्न छोड्दछ। यो कल गर्न र एसएमएस पठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, र थोरै। यो विकल्प परिवर्तन गर्नका लागि जब हामीसँग धेरै थोरै ब्याट्री बाँकी छ र हामी खपतलाई अधिकतममा घटाउन चाहन्छौं। यो मानिन्छ कि फोनको सामान्य मोडको तुलनामा ब्याट्री जीवन तीन गुणा भयो।
एन्ड्रोइड फोनमा ब्याट्रीको प्रकार
त्यसकारण, हामी आफैंमा फेला परेको अवस्थामा निर्भर गर्दै, हामी सक्दछौं यी कुनै पनि शक्ति बचत मोडहरू प्रयोग गर्नुहोस् हाम्रो Huawei फोनमा एन्ड्रोइड पाईको साथ। यसैले, यदि हामीले देख्यौं कि हामी ब्याट्रीमा कम छौं भने, हामी जहिले पनि तिनीहरूमा अलिकति टाढा जान सक्दछौं। विशेष गरी यदि धेरै घण्टा बितेर हामी यसलाई फेरि चार्ज गर्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » एन्ड्रोइड धोखा दिन्छ » एन्ड्रोइड पाईको साथ Huawei ब्याट्री अनुकूलन कसरी प्रयोग गर्ने
Asus ZenFone6प्रमुख क्यामेरा अपग्रेडको साथ नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दैछ